Torolàlana feno ho an'ny indostrian'ny mpitsabo mpanampy ao Amerika Latina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Torolàlana feno ho an'ny indostrian'ny mpitsabo mpanampy ao Amerika Latina
Amerika Latina mpitsabo mpanampy
Amerika Latina dia nahita fitomboana sy fampandrosoana lehibe teo amin'ny fiaraha-monina tato anatin'ny 50 taona, nitondra indostria sy tsena iray manontolo ho an'ny toekarena 20 sy fiankinan-doha 12 mandrafitra ity faritra maro samihafa ity. Ny mpitsabo mpanampy dia sehatra iray manokana izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny fitsaboana ara-pahasalamana amin'ity faritra ity. Ny mpampivelona dia mpitsabo mpanampy izay manome fikarakarana bevohoka an'ireo vehivavy bevohoka sy mitaiza. Noho izany, ny sehatry ny fampinonoana klinika sy ny mpampivelona dia mifandray akaiky ary maro ny matihanina misafidy ny ho mpitsabo mpanampy manana mari-pahaizana (CNM) hanana safidy hanatontosa ny adidy roa tonta.
Mampalahelo fa ny fanaovana fikarohana momba ny indostrian'ny mpitsabo any Amerika Latina dia mety hitarika anao hidina amin'ny lavaky ny bitro amin'ny tatitra ofisialy sy ny fanadihadiana tsy misy lalana na famaranana mazava. Amin'ity torolàlana notsorina ity dia handinika ny antontan'isa sy ny zava-misy mahalaza indrindra izay mamaritra ny toetran'ny indostrian'ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona any Amerika Latina izahay:
Nanjary nalaza kokoa ho an'ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona vaovao ny sekoly an-tserasera
Araka ny miharihary amin'ny fijerena ny sarintany zanabolana zahana, misy faritra ambanivohitra midadasika any Amerika Latina. Ny ankamaroan'ireo tanàna sy vohitra ireo dia tsy manana oniversite eo an-toerana na fandaharam-pianarana diploma. Mazava ho azy, miaraka amin'ny zaza vaovao manodidina ny 30,000 teraka any Amerika Latina isan'andro, ny filàna tsy tapaka ny fampiofanana amin'ny mpampivelona sy ny fanabeazana dia antony iray ihany koa. Ny ankamaroan'ny mpianatra izay tsy mipetraka eo akaikin'ny oniversite dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hanatrika izany sekoly mpampivelona an-tserasera na programa fitaizana be antitra mba hahazoana ny mari-pahaizana ilaina hanombohana ny asany.
Mbola mihoatra ny 1200 ny sekoly fitaizana be antitra any Amerika Latina
Araka ny tatitra navoakan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO), sekoly maherin'ny 1280 no efa fantatra manerana an'i Amerika Latina sy Karaiba. Mety ho toa be dia be izany, fa rehefa dinihinao ny zava-misy dia manana mponina mihoatra ny 630 tapitrisa ny faritra amin'ny ankapobeny, midika izany fa misy fandaharam-pianarana ho an'ny mpitsabo mpanampy isaky ny olona iray tapitrisa. Ireo sekoly ireo koa dia mazàna mifantoka amin'ny faritra an-tanàn-dehibe sy an-drenivohitra, ary vokatr'izany ny ankamaroan'ny faritra dia tsy afaka miditra an-tsekoly eo an-toerana.
Ny ankamaroan'ny faritra dia miatrika tsy fahampiana mpitsabo
Na dia misy firenena sasany any Amerika Latina aza izay manana mpitsabo mpanampy betsaka kokoa noho ny ilaina, ny ankamaroany dia miatrika ny mifanohitra amin'izany - ny tsy fahampiana marobe izay antenaina haharitra 5-10 taona hafa. Ny tsy fahampian'ny sekoly mpitsabo mpanampy voamarina etsy ambony amin'ny toerana maro dia mahatonga ny mpianatra any amin'ireo faritra ireo tsy hieritreritra ny mety ho mpitsabo mpanampy. Na dia any amin'ny firenena nanokana fanabeazana maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena aza dia mbola misy ny fandaniana sy ny sakana tsy hahatongavana ho mpitsabo mpanampy na mpampivelona.
Anisan'ny olana ny zaza Boomera misotro ronono
Raha ny famaritana antony voalohany mahatonga ny tsy fahampian'ny mpitsabo, ny fitomboan'ny fisotroan-jaza dia mety hisy fiantraikany lehibe noho ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy manerantany. Ity sokajin-taona ity, izay 55-75 taona eo ho eo, dia maneho ny ampahany mitombo ao amin'ny mpiasa mpitsabo sy mpampivelona any Amerika Latina. Rehefa misotro ronono ireto olona ireto dia mila onjam-pahaizana vaovao hisolo toerana azy ireo. Ny olana dia tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpiasa amin'ny faritra maro ny tahan'ny fiofanana. Ary koa, na dia efa nitovy isa aza ireo nahazo diplaoma vaovao vonona hameno ny kiraron'ireo boomera zaza misotro ronono, dia mety ho sarotra ho azy ireo ny manakarama nefa tsy manana traikefa.
Olana iray hafa ny fifindra-monina mpitsabo mpanampy
Mpitsabo mpanampy sy mpampivelona ekena maro izay monina sy miasa any Amerika Latina no manonofinofy ny hifindra any amin'ny firenena mandroso hafa izay ahafahan'izy ireo mahazo karama ambony sy mahazo tombony amin'ny toekarena matanjaka. Faniriana azo takarina amin'ny maha-izy azy manokana izany, saingy amin'ny ambaratonga lehibe kokoa dia ratsy ho an'ny mpitsabo amerikana latina satria mpitsabo mpanampy an'arivony maro isan-taona no misafidy mifindra monina, ary mamela banga bebe kokoa aza momba ny tsy fahampiana atrehin'ireo firenena toa an'i Silia sy Bolivia. Mampalahelo fa tena tsy misy fomba mety hanomezan-dry zareo firenena fandrisihana ireo mpiasa mahay sy za-draharaha indrindra hijanonan'izy ireo, noho izany dia mbola ho anton-javatra io.
Ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy dia manaraka ny fironana manerantany
Ny sehatry ny fitaizana be antitra dia anjakan'ny vehivavy manerantany ary io fironana io dia hita ihany koa any Amerika Latina, izay vehivavy ny ankamaroan'ny mpitsabo mpanampy. Na eo aza ny zava-misy fa i Amerika Latina dia poti-fandeferana amin'ny fandeferana ara-kolontsaina, dia mbola tsy nahavita nanetsika ny fiheverana ara-piarahamonina milaza fa tokony ho mpitsabo ny lehilahy ary ny vehivavy kosa tokony ho mpitsabo mpanampy. Ny famoahana sy ny fivoahana any ankoatr'ity fomba fijery taloha ity dia hanampy amin'ny famerana ny hamafin'ny tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy.
Tetezam-pitsaboana lehibe ho an'i Peroa
Raha ny tokony ho izy dia hanomboka ny fikarohana ataontsika amin'ny statistika mifandraika amin'ny firenena amerikanina latina rehetra miaraka amin'ny topy maso ny indostrian'ny mpitsabo any Peroa. Firenena maro no iharan'ny tsy fahampiana mpitsabo, saingy mety ho afaka hameno ny banga amin'ity sehatra ity i Però hatramin'ny 2020. Amin'izany fotoana izany dia tombanana ho 66% ny mpampivelona ary 74% ny mpitsabo mpanampy no hiasa. Manodidina ny 23 ny mpitsabo isaky ny mponina 10,000, manao an'i Peroa ho iray amin'ireo firenena amerikana latina mahay indrindra amin'ny sehatry ny fahasalamana. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona Peroviana dia mety ho sahirana amin'ny karamaina mandritra ny roa taona voalohany amin'ny asany.
Tetezam-pitsaboana lehibe ho an'i Kolombia
Any Colombia dia misy mpitsabo mpanampy 6 fotsiny isaky ny olona 10,000. Na eo aza izany tarehimarika izany, ny salan'isan'ny androm-piainan'ny firenena dia eo amin'ny 79. Amin'ny isan'ny mponina manodidina ny 50 tapitrisa, dia hitantsika fa misy mpitsabo mpanampy 30,000 miasa ao Columbia ankehitriny. Ny salanisan'ny karama ho an'ny mpitsabo mpanampy ao Colombia dia manodidina ny 29,000,000 COP, izay mahatratra hatramin'ny 14,000 COP isan'ora. Raha hametraka izany amin'ny fomba fijery dia manodidina ny $ 4 USD isan'ora. Mazava ho azy, miaraka amin'ny karama toy ireo, dia misy dikany fa ny mpitsabo mpanampy Kolombiana dia hanana nofinofy hifindra any amin'ny firenena izay 5x no karama isam-bolana.
Tetezam-pitsaboana lehibe ho an'i Brezila
Manana mpitsabo mpanampy manodidina ny 4 isaky ny mponina 10,000 i Brezila - isa ambany dia ambany amin'ity metric ity ary iray izay manondro ny tsy fahampian'ny mazava. Miaraka amin'ny isan'ny mponina manodidina ny 209 tapitrisa, midika izany fa manodidina ny 80,000 ny mpitsabo mpanampy miasa ao Brezila ankehitriny. Na izany aza, satria manana velaran-tany midadasika miaraka amin'ny faritra ambanivohitra betsaka ny firenena, dia misy faritra ambanivohitra maro any Brezila izay sarotra na tsy azo atao ny mahazo fitsaboana ara-pitsaboana na mpampivelona. Na dia any amin'ny tanàn-dehibe toa an'i Rio de Janeiro aza dia nisy tranga izay ilain'ny minisiteran'ny fahasalamana ao amin'ny firenena hanakarama mpiasa mpitsabo maika noho ny krizy famatsiam-bola izay namela mpiasa tsy ampy taona ho an'ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana.
Stats ho an'ny mpitsabo mpanampy ho an'i Arzantina
Miaraka amin'ny mpitsabo mpanampy 4 isaky ny olona 1,000, tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo firenena 30 ambony indrindra i Arzantina miaraka amin'ny tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy. Any amin'ny firenena misy olona maherin'ny 44 tapitrisa, dia misy mpitsabo mpanampy 18,000 eo ho eo fotsiny. Mahaliana ny manamarika fa ity firenena ity dia fantatra fa manana dokotera ambim-bava, noho izany dia misy tsy fahampiana hafahafa sy tsy manam-paharoa ao satria ireo hopitaly dia manana dokotera mihoatra ny ampy nefa tsy ampy ny mpitsabo mpanampy. Mahaliana fa ny tsy fahampian'ny mpitsabo arzantina dia manodidina ny roa heny noho ny tamin'ny roapolo taona lasa izay, ary maro ny mpandinika no miahiahy fa ny fihomboana dia vokatry ny fifindra-monina any amin'ny firenen-kafa izay ahazoan'ny fahaizana karama ambony.
Tetezam-pitsaboana ilaina ho an'i Bolivia
Bolivia dia manana mponina manodidina ny 11 tapitrisa ary misy mpitsabo mpanampy 1 isaky ny mponina 1,000. Midika izany fa 1100 fotsiny ny mpitsabo mpanampy ao amin'ny firenena manontolo. Ity dia maneho ny iray amin'ireo tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy ratsy indrindra any Amerika Latina, tranga iray izay tsy mahagaga raha tsapanao fa i Bolivia dia efa anisan'ny firenena mahantra indrindra manerantany. Ny fahasahiranana ara-toekarena amin'ity faritra ity dia mahatonga azy io ho toerana tsy manintona hijanonan'ny mpitsabo mpanampy mahay sy mpampivelona satria saika ny firenena hafa dia manome karama bebe kokoa ho an'io asa io ihany.
Tetezam-pitsaboana ilaina ho an'i Shily
Betsaka ny olona gaga mahita fa misy ny tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy ao Shily, satria fantatry ny besinimaro fa vao haingana ny governemanta no nanolotra malalaka ny fanabeazana ho an'ny olom-pirenena rehetra. Na izany aza, miaraka amin'ny fahafaha-manao asa be dia be toy izany azo isafidianana, ny fikolokoloana sy ny mpampivelona dia lasa asa tsy dia ilaina loatra. Ny firenena dia manana mponina mihoatra ny 18,000,000 ary misy mpitsabo mpanampy 0.145 isaky ny mponina 1000 fotsiny. Io no iray amin'ireo ambany indrindra isaky ny mpitsabo mpanampy eto amin'izao tontolo izao, ary raha tsy hoe natao safidy manintona kokoa ho an'ireo mpianatra ho tonga ny asa dia tsy azo inoana fa ho voavaha tsy ho ela ny tsy fahampiana.
Tetezam-pitsaboana ho an'i Ekoatera
Ny tsy fahampiana mpitsabo mpanampy ao Ekoatera dia tsy dia ratsy toa ny any amin'ny firenena amerikanina latina hafa, miaraka amin'ny mpitsabo mpanampy 2 isaky ny mponina 1000. Ny firenena dia nahita fitomboana lehibe teo amin'ny isan'ireo mpitsabo mpanampy vaovao niseho teo anelanelan'ny taona 1998 sy 2008, nahitana fiakarana hatramin'ny 5 / 10,000 ka nihoatra ny 18 / 10,000 nandritra izany fotoana izany. Na izany aza, Ekoatera dia be dia be ny mpianatra miala an-tsekoly ary vitsy monja amin'ny vahoaka no hanatrika oniversite, ka toa tsy azo inoana fa ny sehatry ny mpitsabo mpanampy dia hanohy ny fiakarana miakatra mihoatra ny onjan'ireo boomers zaza misotro ronono izay hiala ny mpiasa eo anelanelan'ny 2020-2025.
Tetezam-pitsaboana ho an'i Goatemalà
Guatemala dia distrika amerikana latina iray hafa izay ambany dia ambany ny isan'ireo mpitsabo mpanampy isaky ny olona amin'ny 0.864 isaky ny mponina 1,000. Miaraka amin'ny mponina maherin'ny 14,000,000 sy toekarena izay manana banga be eo amin'ny olom-pirenena mahantra sy manankarena indrindra, dia mila mpitsabo mpanampy sy mpampivelona vaovao i Guatemala. Na eo aza ny fananana toekarena lehibe indrindra any Amerika Afovoany, ity dia firenena iray izay iharan'ny fahantrana mihoatra ny 60% ny olona. Raha maimaim-poana ny fampianarana eto amin'ity firenena ity, ny entana ilaina amin'ny famitana fianarana dia mbola lafo ho an'ny olom-pirenena antonony, ary miteraka sakana hafa ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo.
Tetezam-pitsaboana ho an'i Mexico
Tsy misy dikany ny manafina ny indostrian'ny mpitsabo any Amerika Latina raha tsy miresaka ny zava-misy any Mexico ankehitriny. Vao haingana ny governemanta ao amin'ny firenena no nitatitra fa mpitsabo mpanampy 255,000 hafa no ilaina mba hahatratrarana ny torolalan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana amin'ny fananana mpitsabo mpanampy 6 isaky ny mponina 100,000. Amin'izao fotoana izao, Mexico dia tsy manana afa-tsy mpitsabo mpanampy 4 isaky ny 100,000, miaraka amin'ny mpitsabo mpanampy iray tapitrisa eo ho eo izay manompo mponina maherin'ny 129 tapitrisa. Ireo faritra manana tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy be indrindra ao Mexico dia misy an'i Veracruz, Michoacan, Queratero, ary Puebla.
Stats ho an'ny mpitsabo ho an'i Karaiba
Ary farany, satria i Karaiba sy Amerika Latina dia matetika miaraka amina faritra iray ihany amin'ny ankapobeny, dia rariny ihany koa raha miresaka momba ny statistikan'ity faritra ity ihany koa. Misy mpitsabo mpanampy 1.25 isaky ny mponina 1,000 ao Karaiba miteny anglisy. Midika izany fa mpitsabo mpanampy manodidina ny 8,000 no miasa ao amin'ity faritra ity. Hatramin'ny taona 2006, 3,300 ny fangatahana tsy voatanisa ho an'ny mpitsabo mpanampy ao Karaiba. Amin'ny 2025, antenaina hahatratra 10,000 izany isa izany. Isaky ny 5 taona dia mpitsabo mpanampy 2,000 eo ho eo no mandao an'i Karaiba hivezivezy any amin'ny firenena be karama kokoa. Ity statistika ity dia manasongadina ny olana iraisan'ny firenena maro any Amerika Latina - ny tsy fahafahany mitazona ireo mpiasan'ny fitsaboana sarobidy indrindra aminy tsy hifindra monina.
Maninona ny mpianatra no misafidy programa amin'ny Internet mihoatra ny sekoly ivelan'ny Internet
Rehefa mamaky ireo antontan'isa sy hevi-baovao etsy ambony ianao dia manomboka mahita sary mazava be amin'ny faritra iray izay tsy dia ny safidy asa mahasoa indrindra matetika no ny fikatsahana asa ho mpitsabo mpanampy. Mpianatra maro no misafidy ny làlana an-tserasera satria manome azy ireo ny fahafahany mahazo fankatoavana amin'ny oniversite vahiny. Ny fahazoan-dàlana atolotry ny sekoly izay miorina amin'ny firenena mandroso no tiana indrindra amin'ny ankapobeny.
Ny mari-pahaizana avy amin'ny oniversite any Etazonia na Eoropeana dia mety ho tsara kokoa amin'ny fangatahana asa ho avy noho ny mari-pahaizana momba ny fitaizana be antitra azo avy amin'ny oniversite kely na tsy mazava any Amerika Afovoany sy atsimo. Io antony io fotsiny matetika no mandrisika ireo mpianatra fatra-paniry laza hanatratra fanabeazana any ivelany na amin'ny alalàn'ny andrim-pianarana halavirana an-tserasera. Ho famaranana, ny fandaharam-pianarana an-tserasera dia toa manome laza bebe kokoa noho ny sekoly amerikanina latina ivelan'ny Internet, izay midika hoe fifindra-monina sy fotoana fivelarana bebe kokoa.
Ny nosy Mediteraneana Malta dia hampiantrano ny festival Valletta Baroque faha-8 faha-10-25 janoary 2020
Maninona no lafo kokoa izao ny tahan'ny hôtely any Hawaii?